Than Shwe Biography
Jikelele ku-Shwe, owayengumkhokheli waseBurma (owaziwa nangokuthi yiMyanmar ) ungumntu ofihlakeleyo, okhuselayo. Wayengabonakali nantoni malunga nokusabalalisa, iintatheli zeendaba, kunye nama- Buddhist monks abethwa, abavalelwe, bathatyathwa, okanye babulawa. Ngokukholelwa enkolelo, ngo-2005 wanyusa ipropati yesizwe ngokukhawuleza ubusuku, kwiingcebiso zenkwenkwezi.
Nangona amandla akhe angapheliyo, kunokuba uShwe ahlale ehlaziya kangangokuba abantu abaninzi baseBurma akazange bave ilizwi lakhe.
Umtsalane wevidiyo okhutshwe ngokugqithiseleyo womtshato oqaqambileyo owawuthatyelwa intombi kawonke-wonke wabangela ukuthukuthela kulo lonke leli lizwe, njengoko linikeza uluvo lweendlela zokuphila ezizityebi.
Ulawulo lwe-Shwe lubuhlungu kwaye lukhohlakele ukuba uthathwa njengomnye waba-5 abaDictict Worst in 2008.
Into encinci iyaziwa malunga nobomi bokuqala bokugcina. Wazalelwa ngoFebruwari 2, 1933, eKyuakse, kwiCandelo laseMandalay eBurma. Ngexesha lokuzalwa kuka-Than Shwe, iBurma yayicingwa njengeColoni yaseBrithani.
Zimbalwa iinkcukacha zeMfundo ka-Than Shwe ziye zavela, nangona ezinye iindawo zibika ukuba wayeya esikolweni sokuqala esikolweni ngaphambi kokuphuma esikolweni esiphakeme.
Umsebenzi wokuqala kukaRhulumente we-Shwe emva kwesikolo kwakunobhala wenkonzo yeposi.
Ngethuba elithile phakathi kowe-1948 no-1953, incinci kuneShwe yayingena emkhosini wamaBurma, apho yayabelwe khona "inqwelo yengqondo".
Wathatha inxaxheba kwiphulo lokulwa nobudlelwane bekarhulumente elijongene neentlanga-uKaren izigulane ezisempuma yeBurma. Eli phulo lenze ukuba uShwe uzinikezele iminyaka emininzi kwisibhedlele sengqondo ngenxa yesifo sengxaki yokuxinwa kwangemva kwesifo. Nangona kunjalo, uShwe wayeyaziwa njengomloli ongenaluthando; Isitayela sakhe esivinjelwe singenise ukuphakanyiswa kwi-rank of captain in 1960.
Ukungena kwiPolitiki yeSizwe
UCaptain Than Shwe wanceda uGene Ne Win ukuba athathe amandla ekubambeni kowe-1962 owaphelisa isipiliyoni esifutshane sokuzimela emva kwe-Burma ngentando yenkululeko. Wavuzwa ngoluhlu lwezinto zokunyusa, ukunyuka kwinqanaba lika-colonel ngo-1978.
Ngowe-1983, uShwe wathatha umyalelo wemikhosi weSithili seMzantsi-ntshona / i-Irrawaddy Delta ngaseRangoon. Oku kuthunyelwa kwinqununu kukumnceda kakhulu ekufuneni kwakhe i-ofisi ephezulu.
Ngowe-1985, uShwe wakhuthazwa ku-brigadier-jikelele kwaye wanikezelwa ngamagatya amabili kwi-Chief of Army Staff kunye neSekela likaMphathiswa wezoKhuselo. Ngomnyaka olandelayo, waphakanyiswa kwakhona kwi-general-general, kwaye wanikela isihlalo kwiKomidi eliLawulayo eliPhakathi laseBurma.
IJunta yayichoboza inzululwazi yentando yeninzi ngo-1988, kwaye kwafa abaprothestri abangama-3 000. U-Win waxoshwa emva kovuko. Wabona uMuang wathatha ulawulo, kwaye u-Than Shwe wathuthela kwindawo ephakamileyo yeKhabinethi ngenxa yokuba "unako ukubeka bonke abantu ukuba bangenise."
Ukulandela ukhetho lokuvuthwa luka-1990, kunokuba kuthathe indawo esikhundleni sikaSaw Maung njengeNtloko kaRhulumente ngo-1992.
Iipolisi njengeNkokeli ephezulu
Ekuqaleni, u-Than Shwe ubonwa njengongqongqo wezemikhosi wempi kunomnye wabaphambili bakhe. Wakhulula amabanjwa ezombusazwe kwaye wakhulula intando yeninzi-inkokheli yenkokheli u-Aung San Suu Kyi ekubanjweni kwindlu ngasekupheleni kweminyaka yama-1990.
(Wawunqoba ukhetho lukazwelonke luka-1990 nangona ejele.)
UShwe naye wayejongene nokungeniswa kwe-Burma ka-1997 kwi-ASEAN kwaye yachithwa ngorhwaphilizo olusemthethweni. Nangona kunjalo, waba ngumgca onzima kunye nexesha. Umcebisi wakhe wangaphambili, uGeneral Ne Win, wafa phantsi kokubanjwa kwindlu ngo-2002. Ukongeza, i-Than Shwe yenkqubo yezoqoqosho eyingozi yabeka iBurma enye yezona zizwe ezihluphekayo kwihlabathi.
Ngenxa yokuba wayesebenzisana nobudlelwane obubuhlungu bokuzimela kukaKaren kunye nokunyuswa kwentando yesininzi, akumangalisi ukuba uThan Shwe akazange abonelele ngamalungelo abantu.
I-press ye-Free kunye nentetho yamahhala yayingekho eBurma phantsi kokulawula kwakhe. Umongameli we-Win Tin, ongumhlobo we-Aung San Suu Kyi, uye wabanjwa entolongweni ukususela ngo-1989. (U-Aung San ngokwakhe uphinde wabanjwa ngo-2003, kwaye wayephantsi kokubopha indlu kuze kube sekupheleni kuka-2010.)
IJunta yayisetyenziselwa ukudlwengula, ukuhlushwa, isishwankathelo sokusebenza kunye nokunyamalala ukulawula abantu. Imibhikisho ekhokelwa yi-Monk ngoSeptemba ka-2007 yabangela ukutshatyalaliswa kobundlobongela, okwashiya amakhulu afile.
Ubomi Bomntu kunye neZenzo zokuchitha
Okwangoku, i-Than Shwe kunye nezinye iinkokeli eziphezulu zazinandipha ubomi obukhululekile (ngaphandle kokukhathazeka malunga nokukhutshwa).
Ukuzikhethela apho iJunta ezizungezile ziboniswe kwividiyo ehambileyo yokufumana umtshato weNtombi kaShwe, iThand, kunye nomkhosi omkhulu. Ividiyo, ibonisa iintambo zedayimane, ibhedi e-solid-gold bridal, kunye nenani elikhulu le-champagne, abantu abacaphukile ngaphakathi eBurma nakwihlabathi jikelele.
Kwakungekho zonke iigugu kunye ne-BMWs ye-Shwe, nangona kunjalo. Isiqhelo sinesifo sikashukela, kwaye sinokuba nesifo somhlaza wesisu. Uchithe ixesha kwiibhedlele zaseSingapore naseThailand .
Ngomhla ka-30 Matshi 2011, i-Than Shwe yehla njengomlawuli waseMyanmar kwaye ibuye ibuyele phambili kuluntu. Umlandeli wakhe otyongwe ngesandla, uMongameli u-Inin Sein, uqalise uluhlu lweenguqulelo kwaye uvule uMyanmar kwilizwe lamazwe ngamazwe ngokumangalisa ekubeni sele ethatha isikhundla. Umkhokheli we-Dispute u-Aung San Suu Kyi wavunyelwa ukuba asebenze esihlalweni kwiCongress, ayenayo ngo-Ephreli 1, 2012.
Yintoni Oyaziyo NgoKumkani uKroesus waseLydia
I-Biography kunye neProfayili kaNate Diaz
Iimfundiso malunga neColcán Cayambe e-Ecuador
I-Cholera Epidemic ye-1832
Imfazwe Yehlabathi II: Umlambo waseNorth P-61 Omnyama
Umthandazo kuSaint Gregory, uPapa noNgcaciso
Indlela yokufaka i-PHP kwi-Mac
Ukuxilongwa kunye neNgcebiso
Ukuhamba oku-3 kuVavanyo ukuPhucula ukuHlola kwakho